Zodiac ndiyo murairo maererano neicho chinhu chose chakavapo, ndokugara chinguva, uye chinobva chapfuura chisipo, kuwanazve maererano ne zodiac.
Vol. 5 MAY, 1907. Nha. 2
HAPANA rufu rusina kuberekwa, kana kuberekwa pasina rufu. Kune ese kuberekwa kune rufu, uye kurufu rwese munhu akazvarwa.
Kuzvarwa zvinoreva shanduko yemamiriro; saizvozvowo rufu. Kuti aberekwe munyika ino munhuwo zvake anofanira kufa kune nyika yaanobva; kufira nyika ino kuberekwa mune imwe nyika.
Murwendo rwekuenda kune mamwe marudzi asingaverengeki vakabvunza kakawanda kuti, "Tinobvepi?" Tinoendepiko? ”Mhinduro chete yavakanzwa yanga iri yeshoko ravo kumibvunzo yavo.
Kubva pane dzimwe pfungwa dzekufungisisa panouya mimwe mibvunzo mapatya, "Ndouya sei?" Ndinoenda sei? ”Izvi zvinowedzera zvimwe zvakavanzika kune zvisinganzwisisike, uye nokudaro chinyorwa chinozorora.
Ndichiri kupfuura nemumumvuri wedu avo vanoziva kana avo vanga vakangwara mune rumwe rutivi rwezvapamberi vanoti munhu anogona kugadzirisa zvirahwe uye kupindura mibvunzo ine chekuita neramangwana rake nekufananidzwa kwakare. Izvi zvirevo zviri nyore kwazvo kuti isu titeerere kwavari uye tivadzinge vasina kufunga.
Zvakanaka kuti hatigone kugadzirisa chakavanzika. Kuita kudaro kunogona kuparadza yedu nyika yemumvuri tisati tagara mumwenje. Asi isu tinogona kuwana pfungwa yechokwadi nekushandisa fananidzo. Tinogona kubata "Kwatinoenda?" Nekutarisa tarisa tarisiro ye "Tinobvepi?"
Mushure mekubvunza mibvunzo mapatya, "Ndobvepi uye Ndekupi?" Uye "Ndinoenda sei?" Uye "Ndinoenda sei?" Panouya mubvunzo unomutsa mweya, "Ndiri ani?" Apo mweya wakazvibvunza pachako izvi. mubvunzo, harizombofi rakagutsikana zvakare kusvikira razoziva. “Ini! Ini! Ini! Ndini ani? Ndiri pano chii? Ndinobva kupi? Ndiri kuenda kupi? Ndinouya sei? uye ndoenda sei? Zvisinei ini ndinouya kana kupfuura nepakati, kuburikidza nenguva, kana kupfuura, zvakadaro, nguva dzose uye nguva dzose, ndiri ndoga! ”
Kubva pauchapupu uye pakucherekedza, munhu anoziva kuti akauya munyika, kana kuti zvimwe muviri wake wakaita, kuburikidza nekuzvarwa, uye kuti achabuda munyika inoonekwa kubudikidza nerufu. Kuzvarwa ndiko portal inotungamira ichipinda munyika uye nekupinda muhupenyu hwenyika. Rufu kubviswa kwenyika.
Zvinorehwa zvinowanzo gamuchirwa izwi rekuti "kuberekwa" ndiko kupinda kwemweya mupenyu, wakarongeka munyika. Zvinorehwa zvinowanzo gamuchirwa izwi rekuti "kufa '' ndiko kudzima kwehupenyu, muviri wakarongeka kuti uite hupenyu hwayo uye nekuchengetedza sangano
Ino, yedu, nyika, nemamiriro ekunze ayo madhiri ekusingaperi Chidenga kunge chidhanzi chiri kuyangarara munzvimbo isingaperi. Iwo mweya unobva kune wekusingaperi, asi warasa mapapiro uye kuyeuka kwawo uchiuya kuburikidza nemhepo yakaputira yepasi. Yasvika pasi, ichikanganwa imba yayo yechokwadi, inonyengedzwa nemidziyo yayo uye nemweya wenyama yemuviri wayo uripo, haikwanise kuona mukati merutivi rwezvino uye pano. Seshiri ina mapapiro ayo akavhuniwa, haikwanisi kusimuka uye kubhururuka ichienda mukati mayo pachayo. uye saka mweya unogara pano kwechinguva chidiki, wakasungwa musungwa pamwe nemafuta enyama munguva-yenyika, asingafungidzi zvakapfuura, anotya remangwana- risingazivikanwe.
Nyika inooneka inomira pakati pezvinhu zviviri seatreity huru mukusingaperi. Izvo zvisingaoneki nezvisingaonekwe pano zvinova zvinhu uye zvinoonekwa, zvisingagoneki uye zvisina fomu zvinotora pane inooneka fomu, uye iyo isingaperi pano inoita seinoperera painopinda mukutamba kwehupenyu.
Chibereko ndiyo iyo horo umo mweya yega yega inozvisunga mune chipfeko chechikamu chayo uyezve inotanga pachavo mumutambo. Omweya unokanganwa zvakapfuura. Nyoreti, pendi, chipfeko, tsoka dzemitambo uye mutambo unoita kuti mweya ukanganwe kuve kwake mukusingaperi, uye wakanyudzwa mune diki yekutamba. Chikamu chayo pamusoro, mweya unosunungurwa pazvipfeko zvawo mumwe neumwe uye unouniswazve mukusingaperi neruvanze rerufu. Mweya unopfeka nguo dzawo dzenyama kuti dziuye munyika; chikamu chayo pamusoro, chinobvisa hembe idzi kusiya nyika. Hupenyu hwepamberi nechisimba ndiwo maitiro ekupfeka, uye kuberekwa idanho rinobuda padanho renyika. Maitiro ekufa ndiko kudzora uye kupfuura nekudzokera kunyika dzekuchiva, kufunga kana kuziva (♍︎-♏︎, ♌︎-♐︎, ♋︎-♑︎) kwatakabva.
Kuti tizive maitiro ekumashure, isu tinofanira kuziva maitiro ekumassa. Kuti tizive shanduko panguva yekubuda kunze kwenyika, tinofanira kuziva shanduko painenge ichiuya munyika. Kuti azive maitiro ekufukunura kana zvekuisa pamutengo wemuviri wenyama, munhu anofanira kuziva imwe nzira ye physiology uye yeiyo physiology yekukura kwe fetus.
Kubva panguva yekutevedzera kusvika pakuzvarwa munyika yemweya, iyo dzidziso yekuzvarwa patsva ine chekuita nekugadziriswa kwemaficha ayo, uye kuvaka kwemuviri wayo wemukati kuti igare. Pakati peino nguva ego haisi mumuviri, asi iri kusangana naamai kuburikidza nemanzwiro uye manzwiro, kungave nehunyanzvi kutarisira uye kugadzira kwemuviri wayo kana iri muchiroto mamiriro. Aya mamiriro anogadzwa nekuvandudza kwekutanga kweiyo ego sekune masimba ayo uye masimba.
Mweya wega wega unogara mune imwe nyika yakasarudzika neyake, uye yayo yekugadzira, iyo inoenderana nayo kana inozvizivisa neyayo. Omweya unovaka muviri wenyama mukati nekukomberedza chikamu chega kuti ugare uye ruzivo munyika yepanyama. Kana mutorwa achinge apera, unoshatisa muviri wenyama nemaitiro anonzi kufa nekuora. Munguva neye mushure meiyi nzira yekufa inogadzirira imwe miviri inogara mairi zvisingaonekwe neino nyika yenyama. Asi kunyangwe iri mune inooneka nyika kana isingaoneki nyika, iyo dzidziso yekuzvarwa patsva haina kumbobvira kunze kwayo kana chikamu chezviito.
Mushure mehupenyu zvichangopera izvo ego zvinokonzeresa kuti muviri wenyama uturwe, kupedzwa uye kugadziriswa muzvisikwa zvawo nemweya wenyama, wemakemikari, uye panosara chinhu chemuviri wemuviri kunze kwehutachiona. Utachiona uhwu hahuonekwi neziso renyama, asi rinoramba riri mukati menyika yemweya. Kufanekidza muviri wenyama, hutachiona uhwu hwunoita sekupenya, unopisa marasha panguva yekufa uye kuora kwemuviri wenyama. Asi kana zvimiro zvemuviri wenyama zvikagadziriswa muzvisikwa zvawo uye nemweya wekuberekwazve wapfuura munguva yayo yekuzorora hutachiona hunopera kupisa uye kupenya; iyo zvishoma nezvishoma inoderera muhukuru kusvikira pakupedzisira yaita kunge sediki inopiswa kunze sosi yeruvara rweblue. Rinoenderera mberi senge dota reAsy mune rinoonekera renyika yemweya mukati menguva yese yekunakidzwa uye kuzorora kweiyo ego. Iyi nguva yekuzorora inozivikanwa kune vanamato akasiyana se "Denga." Kana nguva yekudenga yavo yapera uye gudziro iri kugadzirira kuberekwa, iyo yakatsvairwa cinder, seyi hutachiona hwehupenyu hwepanyama, inotanga kupenya zvakare. Inoenderera mberi ichipenya uye kuve yakajeka sezvo ichiunzwa muukama hwehukama nevabereki vayo venguva pfupi nemutemo wekusimba.
Kana nguva yakwana yekuti hutachiona hwenyama hutange kukura kwemuviri wepanyama unopinda muukama hwepedyo nevabereki vayo venguva yemberi.
Pakutanga kwevanhu, vamwari vakafamba pasi nevarume, uye varume vaitongwa neuchenjeri hwevamwari. Munguva idzodzo vanhu vakateedzera chete pane dzimwe nguva uye nechinangwa chekubereka zvisikwa. Munguva idzodzo paive nehukama hwepedyo pakati peyeyeya aive akagadzirira kuita muviri uye vahosi vaifanira kupa muviri wenyama. Kana giravhiti yaigadzirira uye ichida kuibvisa mumuviri yakazivisa kusakwana kwayo nekubvunza ivo vayo vorudzi vayo uye kurongeka avo vaigara munyika yepanyama kugadzirira muviri wemuviri mukati mayo inogona kuitika mumuviri. Nekubvumirana kuri kuita murume nemukadzi vakaswedera vakatanga nzira yekugadzirira nekusimudzira iyo yakagara kusvikira kuberekwa kwemuviri. Gadziriro yacho yaisanganisira kudzidziswa kumwe uye mhemberero dzezvinamato zvechitendero izvo zvainzi zvaive zvakatsiga uye zvitsvene. Ivo vaiziva kuti vaive voda kunyora zvekare nhoroondo yezvekusikwa uye kuti ivo pachavo vaifanira kuita savanamwari mukuwonekwa pamberi pezvemweya wepasirese. Mushure mekucheneswa kwakakodzera uye kurovedzwa kwemuviri nepfungwa uye panguva yakatarwa uye mwaka yakakodzera uye yakaratidzwa neiyo ego yekuisa mumuviri, iyo tsika inoyera yekunyepedzera sakaramendi yakaitwa. Ipapo mweya wega wega wekusanganiswa mukati merimwe senge-mweya wekufema, wakagadzira mamiriro akapoteredza iwo maviri. Munguva yemitambo yemubatanidzwa, hutachiona hunopenya hweramangwana remuviri hwakafumuka kubva mudanga remweya weavo ndokupinda muchikamu chekufema kwemaviri. Utachiona hwakapfuura senge mheni kuburikidza nemiviri yevaviri uye ndokukonzera kuti vafare sezvo zvaitora ficha yechikamu chimwe nechimwe chemuviri, vobva vazvisimbisa mukati mechibereko chemukadzi uye ichiva chisungo chakakonzera hutachiona huviri hwepabonde kupinda mukati imwe — iyo yakamisikidzwa ovum. Ipapo yakatanga kuvakwa kwemuviri uyo waizove wepanyama wenyika weiyo ego.
Iyi ndiyo nzira yaive nehungwaru pakutonga kwevanhu. Ipapo kuberekwa kwemwana kwakapindwa nekurwadziwa, uye zvisikwa zviri munyika zvaiziva nezveavo vaizopinda. Hazvina kudaro izvozvi.
Ruchiva, lasciviousness, zvepabonde, voluptuousness, masikirwo, ndivo vatongi varipo vavarume avo zvino vanoshuva mubatanidzwa wepabonde vasina kufunga nezvevasina mhosva ivo vanouya munyika kuburikidza nemaitiro avo. Shamwari dzisingadzivisike kune idzi tsika inyengeri, unyengeri, hunyengeri, kunyepa uye kunyengera. Zvese pamwechete ndizvo zvinokonzeresa kusuwa kwenyika, kurwara, chirwere, kupenga, kusaziva, kutambudzika, kutya, godo, kunyangwe, godo, usimbe, usimbe, kukanganwa, kutya, kushaya simba, kushushikana, kuzvidemba, kunetseka, kusuwa, kusuwa uye kufa. Uye kwete ivo chete vakadzi vorudzi rwedu vanotambura kurwadziwa mukuzvara, uye vaviri varume vanoiswa kuzvirwere zvavo zvisina kujairika, asi iyo inouya egos, ine mhosva yezvivi zvimwechete, vanotsungirira kutambudzika kukuru panguva yehupenyu hwokutanga uye hwekuzvarwa. (Ona Zvekunyora, The Word, Vol. 5, Kwete. 1, p.97.)
Hutachiona husingaoneki kubva pasirese yemweya ndiyo pfungwa uye yekugadzira archetypal zvinoenderana neyo iyo muviri wepanyama unovakwa. Utachiona hwemurume uye hutachiona hwemukadzi ndiwo masimba anoshanda uye anopfuura ose echisikirwo ayo anovaka zvichienderana nekugadzirwa kwehutachiona husingaonekwe.
Kana hutachiona husingaonekwe hwauya kubva munzvimbo yake mune mweya wemweya uye wapfuura nemurazvo-mweya weairi wakabatana ndokutora nzvimbo yawo mudumbu unobatanidza hutachiona huviri hwehuviri, uye hunhu hunotanga basa rake rekusika. .
Asi hutachiona husingaonekwe, kunyange huri kunze munzvimbo yacho mune mweya wemweya, hauna kubviswa kubva kumweya wemweya. Pakubva pashesi yemweya iyo inopenya isingaonekwe hutachiona inosiya nzira. Iyi terevhizheni inoyevedza kana yeanoshamwaridzika akakandwa, zvichienderana nechimiro cheuyo achazova mumuviri. Iyo nzira inova tambo inobatanidza iyo yakadonha isingaonekwe hutachiona nenyika yemweya. Tambo inobatanidza hutachiona isingaoneki nemweya wemubereki wayo inoumbwa netambo ina mukati mematanho matatu. Pamwe chete vanoita kunge tambo imwe; mune rumwe ruvara vanosiyana kubva kuhurema, kunorema kutungamira kune yakajeka uye goridhe hue, chiratidzo chekuchena kwemuviri mukati mekugadzira.
Tambo iyi inopa iwo maratidziro ayo anoendeswa kune fetus zvese zvinokanganiswa uye maitiro ehunhu, sezvo ivo vachiiswa mukati memuviri uye iwo unosara sembeu (skandas) kutumbuka uye kubereka muchero sezvo muviri uchikura muhupenyu, uye mamiriro dzakagadzirirwa kuratidzwa kwemaitiro aya.
Tambo ina idzo dzinoumba tambo ndiyo nzira dzinopfuura nepo zvinhu zvakakurisa, chinhu chezvemweya, hupenyu hwehupenyu, uye chishuvo chinhu, chakavezwa mumuviri we fetus. Kuburikidza nezvisote zvitatu zvakapoteredzwa tambo ina dzinotapurwa chinhu chakakwira chemuviri, icho, icho chiri musimboti wemapfupa, mutsipa nemhezi (manas), mongo (buddhi), uye nheyo yeutachiona (atma). Tambo idzi ina dzinotungamira nyaya inova ndiyo chaiyo yeganda, bvudzi uye zvipikiri (sthula sharira), nyama tishu (linga sharira), ropa (prana) uye mafuta (Kama).
Sezvo nyaya iyi ichirambidzwa uye kudzikiswa ikoko kunogadzirwa muna mai zvimwe zvakatsiga kunzwa uye maitiro, akadai semuenzaniso, sekuda kwechimwe chikafu, nekukurumidza manzwiro uye kubuda, zvisinganzwisisike zvekunzwa uye kushuva, maitiro epfungwa echitendero, hunyanzvi, nhetembo. uye ruvara rwegamba. Chikamu chimwe nechimwe chakadai chinoita sekukanganiswa kwechimiro chechisimba chiri kutapurwa uye chichiitwa mukati memuviri wemwana ari mudumbu kuburikidza nemubereki wake munyama.
Munguva dzekare baba vaitora chikamu chakakosha mukuvandudza mwana ari mudumbu uye akazvichengetedza nekuchenjerera pabasa iri sezvakaitwa naamai. Munguva dzino dzakashatisa hukama hwababa kubva kune mwana ari mudumbu hunofuratirwa uye husingazivikanwe. Chete kuburikidza nehukama hwepanyama, asi mukusaziva, dai iye zvino achitoita zvakanaka pamusikanzwa wemukadzi mukukura kwemucheche.
Rugwaro rwese rwechokwadi uye cosmogony inotsanangura kuvakwa kwemuviri wenyama mukukura kwayo zvishoma nezvishoma. Saka, munaGenesi, kuvakwa kwenyika mumazuva matanhatu itsanangudzo yekukura kwemwana, uye pazuva rechinomwe Ishe, Elohim, ivo vavaki, vakazorora kubva pamabasa avo, sezvo basa rakanga rapedzwa uye nemurume wakaitwa mumufananidzo wevasiki vake; ndiko kuti, kune chega chikamu chemuviri wemunhu pane simba rinoenderana uye chinhu muchimiro, iro riri muviri waMwari, uye zvisikwa zvinotora chikamu mukuvaka kwemuviri zvakasungwa kune icho chikamu chavakavaka uye inofanira kupindura kuchimiro chebasa iro iro chikamu chinorayirwa neakadzika mweya kuita.
Chikamu chega chega chemuviri chihwitsi kukwezva kana kuchengetedza kubva pamasimba echisikigo. Sezvo talisman ichishandiswa masimba anopindura. Munhu zvirokwazvo ndiye masirosari anogona kudaidza macrocosm zvinoenderana neruzivo rwake kana kutenda kwake, kugadzira mufananidzo uye kuda kwake.
Kana "fetus" yapedzwa, iko kungovakwa kwemunhu wenyama muchikamu chake kanomwe, icho chaitwa. Iyi ingori yepasi pasi yemweya. Asi iyo ego haisati yatova mumuviri.
"Fetus", painenge yakwaniswa uye yazorora, inosiya nyika yaro yerima, mbereko, uye ikafa mairi. Uye urwu rufu rwe "fetus" ndiko kuberekwa kwavo munyika yepanyama yechiedza. Kufema, kuridza mhere uye kuchema, uye kuburikidza nemweya mweya unozoita unopinda mukati mawo uye ndokuzvarwa mairi uye wakavanzika nehungwara hwemweya wemubereki wavo pamusoro pemweya. Irovo, zvakare, rinofa rinobva munyika uye rakazvarirwa mukati uye rakanyudzwa kupinda munyama yenyama.